Detoronomy 28 - Ny Baiboly
Detoronomy toko 28
1Raha manaiky tsara ny feon'ny Tompo Andriamanitrao hianao, ka manaraka sy mitandrina ny didiny rehetra andidiako anao anio, Iaveh Andriamanitrao hanandratra anao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany. 2Izao fitahiana rehetra izao no ho tonga aminao sy ho azonao, raha manaiky ny feon'ny Tompo Andriamanitrao hianao.
3Ao an-tanàna hianao hotahina; any an-tsaha hianao hotahina. 4Hotahina ny naloaky ny kibonao, ny vokatry ny taninao, ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny teraky ny biby manompo lehibe sy ny madinika. 5Hotahina ny sobika sy ny vata fitahiriza-mofonao. 6Miditra hianao hotahina, mivoaka hianao hotahina.
7Ny fahavalo mitsangan-kiady aminao hataon'ny Tompo vaky mandositra eo anoloanao; làlana iray no nandrosoany hiady aminao, fa làlana fito kosa no handosirany eo anoloanao. 8Handidy ny fitahiany homba anao Iaveh, amin'ny sompitrao sy amin'ny asan-tànanao rehetra. Hotahiny hianao any amin'ny tany izay omen'ny Tompo Andriamanitrao anao.
9Hampaharitra anao Iaveh ho vahoaka masina ho azy, araka ny efa nianianany taminao, raha mitandrina ny didin'ny Tompo Andriamanitrao hianao, ka mandeha amin'ny làlany; 10dia ho hitan'ny firenena rehetra fa antsoina aminao ny anaran'ny Tompo ka hatahotra anao izy ireo.
11Hofenoin'ny Tompo soa hianao, dia ny aloaky ny kibonao, ny teraky ny biby fiompinao, ary ny vokatry ny taninao, any amin'ny tany efa nianianan'ny Tompo tamin'ny razanao homena anao. 12Hovohan'ny Tompo ho anao ny raki-tsoany, dia ny lanitra, handatsahany ny ranonorana amin'ny fotoany eo amin'ny taninao, sy hitahiany ny asan-tànanao rehetra. Firenena maro no hampisamboranao, fa hianao kosa tsy mba hisambotra. 13Halahatry ny Tompo ho lohany hianao, fa tsy ho rambony. Ho ambony mandrakariva hianao, fa tsy ho ambany na oviana na oviana, raha tahiny hianao mitandrina ny didin'ny Tompo Andriamanitrao, izay andidiako anao anio, ka mitandrina sy manaraka izany, 14fa tsy mivily ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavian'ny didy rehetra andidiako anao anio mba hanaraka sy hanompo andriamani-kafa.
15Fa raha tsy manaiky ny feon'ny Tompo Andriamanitrao kosa hianao, mba hitandremanao sy hanarahanao ny didiny rehetra sy ny lalàna rehetra andidiako anao anio, dia izao no ozona rehetra ho tonga sy hihatra aminao:
16Ao an-tanàna hianao hozonina; any an-tsaha hianao hozonina. 17Hozonina ny sobika amam-bata fitahiriza-mofonoa. 18Hozonina ny aloaky ny kibonao, ny vokatry ny taninao, ny teraky ny biby fiompinao lehibe sy madinika. 19Miditra hianao hozonina, mivoaka hianao hozonina.
20Ozona, horohoro ary fampitahorana no hatsindrin'ny Tompo anao amin'izay raharaha hataonao rehetra mandra-paharingana sy levona faingana anao, noho ny haratsian'ny asa nataonao, izay nahafoizanao ahy. 21Hopetahan'ny Tompo areti-mandringana ny tenanao, mandra-pahalevona anao tsy eo amin'ny tany vao hidiranao hanananao azy. 22Iaveh hikapoka anao amin'ny areti-mampitsipozipozy, tazo, fanaintainana, hafanana mahamay, andro mihantona, aretim-bary sy niela, ka hoenjehin'ireo hianao, mandra-pahalevona anao. 23Ny lanitrao eo ambony lohanao ho varahina, ary ny tany eo ambany tongotrao ho vy. 24Ny vovoka amam-pasika no ranonorana halatsak'Iaveh amin'ny taninao, ka hidina avy any an-danitra hankaminao, mandra-pahalany ritra anao.
25Hataon'ny Tompo resy eo anoloan'ny fahavalonao hianao, làlana iray no hivoahanao hiady aminy, fa làlana fito kosa no handosiranao eo anoloany, ary ho zavatra mahatsiravina ho an'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany hianao. 26Hohanin'ny voromanidina rehetra sy ny biby dia ny fatinao, ary tsy hisy hanaitra an'ireny.
27Iaveh hikapoka anao amin'ny dridran'i Ejipta, fivontosam-body, anakandro, ary hatina tsy laitram-panafody. 28Iaveh hikapoka anao amin'ny firediredena, fahajambana, ary fahaverezan-tsaina, 29hitsapatsapa amin'ny mitatao-vovonana, toy ny jamba amin'ny aizim-pito hianao; tsy hahomby amin'ny làlana alehanao, hampahoriana isan'andro hianao, ary hobaboina, nefa tsy hisy hamonjy anao. 30Hifamofo amim-behivavy hianao, fa olon-kafa no hahazo azy; hanao trano hianao fa tsy honina aminy; hamboly voaloboka hianao, fa tsy hahazo ny vokany. 31Hovonoina eo imasonao ny ombinao, fa tsy hihinana amin'izany hianao, hotsoahana eo anatrehanao ny ampondranao, fa tsy haverina aminao izy, ary hatolotra ny fahavalonao ny ondrinao, fa tsy hisy hamonjy anao akory. 32Hatolotra ny firenena hafa ny zanakao lahy aman-janakao vavy, ka ny masonao foana no hipitrapitra sy ho valalanina tontolo andro noho ny alahelo azy, fa ny tànanao tsy hahefa na inona na inona. 33Ny vokatry ny taninao, ny vokatry ny asanao rehetra, hohanin'olon-kafa tsy fantatrao akory, ary hianao hampahoriana sy homongoin'ny sasany isan'andro. 34Hanjary adala hianao amin'ny fijerena ny zavatra ho hitan'ny masonao.
35Hasian'ny Tompo fery ratsy tsy laitra-panafody ny lohalikao sy ny fenao, hasiany hatrany am-paladianao ka hatrany an-tampon-dohanao. 36Hampandehanin'ny Tompo hianao sy ny mpanjaka natsanganao ho lohanao, ho any amin'ny firenena tsy fantatrao sy tsy fantatry ny razanao, dia hanompo andriamani-kafa vato aman-kazo any hianao, 37ka hanjary figagan'ny olona sy fanao angano amam-pihomehezana hianao, any amin'izay vahoaka rehetra hitondran'ny Tompo anao any. 38Be no voan-javatra hoentinao any an-tsahanao fa kely no hakarinao, satria ho lanin'ny valala ireny. 39Hamboly voaloboka hianao, sy hanolokolo azy koa, fa tsy hisotro ary tsy hioty na inona na inona akory, satria hohanin'ny fositra ireny. 40Hanana fototr'oliva hianao amin'ny faritaninao rehetra, fa tsy hihosotra diloilo akory, satria hihintsana ny olivanao. 41Hiteraka zazalahy aman-jazavavy hianao, nefa tsy ho anao ireny, fa ho lasan-ko babo. 42Ho lanin'ny bibikely ny hazonao rehetra sy ny vokatry ny taninao. 43Ny vahiny monina eo aminao hisondrotra hatrany ho ambony noho hianao; fa hianao kosa hietry mandrakariva ho ambany; 44izy hampisambotra anao, fa hianao kosa tsy mba hampisambotra azy, izy ho lohany, fa hianao kosa ho rambony.
45Hianjera aminao avokoa ireo ozona rehetra ireo, ary hanenjika sy hahatratra anao tokoa, mandra-paharinganao mihitsy, noho hianao tsy nanaiky ny feon'ny Tompo Andriamanitrao, hitandremanao ny didy aman-dalàny nandidiany anao. 46Ary ho famantarana amam-pahagagana ho anao sy ny taranakao mandrakizay izany.
47Noho hianao tsy nanompo an'ny Tompo Andriamanitrao an-kafaliana sy an-jotom-po ho valin'ny fananam-be amin'ny zavatra rehetra; 48dia amin'ny hanoanana sy hetaheta, ary amin'ny fitanjahana sy tsy fananana na inona na inona kosa no hanompoanao ny fahavalonao, izay halefan'ny Tompo hamely anao; hanisy jioga vy ny vozonao mandra-pandringany anao izy. 49Firenena avy lavitra, avy any amin'ny faravazantany, faingam-pandeha hoatra ny fanidin'ny voromahery, firenena tsy azonao veroka akory no hampandehanin'ny Tompo hamely anao; 50firenena mahatsiravina endrika, tsy handala ny antitra na hangoraka ny tanora akory. 51Ho laniny ny teraky ny biby fiompinao sy ny vokatry ny taninao mandra-pahalevona anao. Tsy misy hamelàny ho anao, na vary, na divay vaovao, na diloilo, na teraky ny biby fiompinao, na lehibe na kely, mandra-pandringany anao. 52Hataony fahirano hianao, anatin'ny vavahadinao rehetra, mandra-paharavan'ny manda avo sy mafy amin'ny taninao, izay nitokianao. Hataony fahirano hianao ao amin'ny vavahadinao rehetra sy amin'ny tany rehetra, izay nomen'ny Tompo Andriamanitrao anao. 53Hohaninao ny naloaky ny kibonao, dia ny nofon'ny zanakao lahy aman-janakao vavy, izay nomen'ny Tompo Andriamanitrao anao, fa ho mafy loatra ny horohoro amam-pahoriana haneren'ny fahavalonao anao. 54Ny lehilahy fatra-piangentsana sy zatra manao fiainana indrindra aminareo, ho ratsy fijery ny rahalahiny sy ny vady mandry eo am-pofoany ary ny zanany sisa tsy novonoiny, 55ary tsy misy omeny amin'ny nofon-janany izay hohaniny, satria tsy hisy sisa intsony ao aminy noho ny hamafin'ny horohoro amam-pahoriana haneren'ny fahavalonao anao, anatin'ny vavahadinao rehetra. 56Ny vehivavy fatra-piangentsana sy zatra manao fiainana indrindra aminareo, izay malemilemy sy sarotsarotiny ka tsy sahy manitsaka ny tany amin'ny faladiany akory, dia ho ratsy fijery ny vady mandry eo am-pofoany, sy ny zanany lahy aman-janany vavy, 57noho ny amin'ny ahitra izay nivoaka avy eo anelanelan'ny tongony, sy noho ny zanany vao teraka, satria hohaniny mangingina izany, fa tsy manana na inona na inona izy, noho ny hamafin'ny horohoro amam-pahoriana haneren'ny fahavalonao anao, anatin'ny vavahadinao rehetra.
58Raha tsy tandremanao tsara ny fanarahana ny teny rehetra amin'ity lalàna ity, izay voasoratra amin'ity boky ity, ka tsy atahoranao ity anarana be voninahitra sy mahatahotra ity hoe Iaveh Andriamanitrao, 59dia hataon'ny Tompo mahatsiravina mihitsy ny loza hamelezany anao sy ny loza hamelezany ny taranakao, loza lehibe sady tsy tapaka, aretina mafy sy sarotra sitranina. 60Hataony hihatra aminao indray ny aretina rehetra tany Ejipta izay nampangovitra anao, ka hiraikitra aminao izany.
61Fanampin'izany, hataon'ny Tompo mahazo anao koa, ny aretina amam-pery isan-karazany izay tsy voasoratra amin'ny bokin'ity lalàna ity, mandra-paharinganao. 62Hianao efa maro toy ny kintana eny an-danitra iny, ka ho olom-bitsy sisa ho tavela aminao, noho hianao tsy nihaino ny feon'ny Tompo Andriamanitrao. 63Ho toy ny nifalian'ny Tompo tamin'ny nanasoavany sy nampitomboany anao ihany no hifalian'ny Tompo koa amin'ny handringanany sy handravàny anao kosa, ka hofongorana hianareo amin'ny tany hidiranao hanananao azy.
64Haelin'ny Tompo any amin'ny vahoaka rehetra hatrany amin'ny faravazantany hianao, ary any dia hanompo andriamani-kafa vato aman-kazo tsy fantatrao na fantatry ny razanao akory. 65Any amin'izany firenena izany hianao, dia tsy ho afaka ahiahy ary tsy misy tany hitsaharan'ny faladianao; fo tebiteby, maso manjambena ary fanahy miferin'aina no homen'ny Tompo anao any. 66Ny ainao hihevingevina eo anoloanao, hianao hangovitra andro aman'alina, ka tsy hanompo izay ho velona intsony hianao. 67Maraina hianao hanao hoe: Malakia hariva! Hariva hianao hanao hoe: Malakia maraina! noho ny tahotra hampivadi-po anao sy ny zavatra ho hitan'ny masonao. 68Haverin'ny Tompo an-tsambo ho any Ejipta hianao, hihazo ny làlana voalazako taminao hoe: Tsy ho hitanao intsony izany, ary any hianareo hivaro-tena ho andevolahy sy andevovavy amin'ny fahavalonareo nefa tsy hisy mpividy.
69Izao no tenin'ny fanekena nandidian'ny Tompo an'i Moizy hatao amin'ny zanak'Israely, tany amin'ny tany Moaba, afa-tsy ilay fanekena nataony taminy tany Horeba. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0688 seconds